चितवन । नारायणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले २५औ बार्षिकोत्सव तथा रजत महोत्सव २०७८ को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ । जसअन्तर्गत सोमबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको थियो । उक्त शिविरमा दुईसय जना स्थानीयले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिएको संस्थाका सह–सचिव हरिकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
श्री भद्रकुमारी राष्ट्रिय आधारभुत बिधालय गुलाफ वागमा आयोजित शिविरमा चितवन मुटु अस्पताल प्रा.लि. र एपोलो डेन्टल क्लिनिक प्रा.लि.ले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन् । शिविरमा सेवाग्राहीको निशुल्क दन्त परीक्षण र मुटु परीक्षण गरिएको थियो । दन्त परीक्षण एपोलो डेन्टल क्लिनिक। चौबीस कोठीका डाक्टर बासुदेव पाण्डे ,सिर्जना क्षेत्री र पुजा श्रेष्ठको टोलीले गरेको थियो भने मुटु तथा प्रेसर, सुगर परीक्षण मुट अस्पताल,भरतपुरका डाक्टर सन्तोष भुषालले गरेका थिए ।
साकोसले रजत महोत्सवको अवसरमा विभिन्न रचनात्मक तथा सामाजिक कार्य गर्दै चैत्र ३० गते कार्यक्रम समापन गरिने संस्थाका सह–सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । चैत्र २९ गते मंगलबार नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, नारायणपुर उपशाखा र नारायणी साकोसको संयुक्त आयोजनामा बृहत खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम राखिएको छ।